Footers sy header CSS avo lenta 29 ho an'ny pejin'ny pejy | Famoronana an-tserasera
Ny lohateny sy ny footers dia Singa tena ilaina rehefa mamorona pejy vaovao tranonkala na bilaogy, na raha tsy misy zavatra hafa dia mila manavao azy ireo izahay mba hahatratrarana ny fenitry ny famolavolana tranonkala ankehitriny. Izy ireo dia toerana ahafahan'ny mpitsidika ny tranonkalantsika mandinika tsara, noho izany dia tokony hikarakara azy ireo isika ary hanome azy ireo fahafaham-po hahafinaritra azy ireo, ankoatry ny fiasana.
Izay no antony hizarantsika Lohatenin-tsoratra sy tongony CSS 29 azonao ampiasaina amin'ny bilaoginao na tranokalanao, ary omeo an'io toetra io izay notadiavinao. Ity lisitra ity dia misy lohatenin-dahatsoratry ny écran feno, ary koa ny habeny mahazatra, lohateny miorina na raikitra, footer ary lohateny video sasany hanomezana fomba fijery hafa ny tranonkalanao.
1 Lohateny miolaka
2 Sarin-doha Parallax
3 Header raikitra zoro
4 Lohateny mitongilana
5 Header miaraka amin'ny sarimiaina SVG
6 Raikitra ny lohateny miaraka amin'i Div
7 Sary parallax misy sosona maro
8 Lohatenin'ny paositra
9 Lohatenin'ny efijery feno sary mihetsika
10 Sarin'ny maherifo feno
11 Flexbox misy bokotra
12 Lohatenin'ny mahery fo Flexbox
13 Header Header amin'ny horonana
14 Miraikitra amin'ny horonam-peo mamaly
15 Lohatenin'ny horonam-boky
16 Header Scroll mamaly
17 Header miditra / mivoaka
18 Lany loha
19 Lohateny miafina
20 Footer paralaks
21 Footer miaraka amin'ny mizana atiny
22 Media sosialy footer
23 Lisitry ny footer finday mihetsika
24 Fioteran'ny raikitra tsotra
25 Lohatenin'ny React Video
26 Lohateny video
27 Lohaten-dahatsary an-tsarimihetsika feno miaraka amin'ny Mix-Blend
28 Sarimiaina an-dohan'ny Video
29 Lohatenin'ny horonantsary mamaly amin'ny gradient
Lohateny izay ampahafantarin'i ny endriny miolakolaka ao ambany izay mahatonga azy ho lohany manokana ho an'ny tranokala na bilaogy. Izy io dia CSS madio, noho izany dia efa mila fotoana ny fitsapana ny fizotran'ny tranonkalanao satria ho hitanao raha ampidirinao ao amin'ny bilaoginao izany.
Miaraka amin'ny vokatra sary Parallax lehibe, ity lohateny ity dia mampahafantatra ny tenany amin'ny ampiasao ny toerana misy ny sary CSS. Ny sary lohateny dia apetraka eo an-tampon'ny pejy hahazoana kaody vokadratsy lehibe.
Header raikitra zoro
Ity lohateny ity dia raikitra tsara eo an-tampon'ny pejin-tranonkala ka manavaka izany tsipika diagonal izany izay mamakivaky ny marindrano manontolo ny fijerin'ny mpampiasa. Mampiseho ny fomba azo ampiasana singa pseudo CSS hamoronana lohateny misy sary any aoriana.
CSS sy HTML ho an'ity lohateny ity izay miavaka amin'ny ohatra omena manaraka an'io tsipika diagonal io izay mamakivaky ny efijery iray manontolo amin'ny lafiny iray.
Header miaraka amin'ny sarimiaina SVG
Lohateny tsotra be, na dia mampiasa aza sary mihetsika SVG hanavahana ny tenanao amin'ireo ananantsika ato amin'ity lisitra ity. Azonao atao ny miditra amin'ny lisitr'ireo pejin-tranonkala miaraka amin'ny sary mihetsika SVG avy eto.
Raikitra ny lohateny miaraka amin'i Div
Miaraka amin'ny sary Parallax sary, header raikitra izay miavaka amin'ny vokatra lehibe tratra miaraka amin'ny sary miorim-paka raikitra ary ny ambiny kosa dia mihodina rehefa miodina amin'ny totozy isika.
Sary parallax misy sosona maro
Lohatenin'ny efijery feno sary mihetsika
Lohateny izay manome sary mihetsika izay mihetsika aoriana ary izany dia miteraka vokatra mampiala voly amin'ny mpijery.
Sarin'ny maherifo feno
Con effet zoom, ity efijery feno lohateny Izy io dia nambara ho iray amin'ny originality lehibe. Tonga lafatra ho an'ny tranonkala iray izay hampiasan'ny mpitsidika ny fikororohana hifindra manodidina azy.
Flexbox misy bokotra
Lohateny izay maka ny sakan'ny efijery iray manontolo hanehoana bokotra iray. Tonga lafatra ho an'ny pejy fitobiana miaraka amin'ny boaty CSS flexbox.
Lohatenin'ny mahery fo Flexbox
Lohateny misy vokany tsotra sy parallax ary flexbox izay misongadina amin'ny fahamendrehan'ny famolavolana azy indrindra.
Header Header amin'ny horonana
Araka ny tondroin'ny anarany, lohateny maharitra rehefa miodina amin'ny totozy isika rehefa mihetsika hahita ny sisa amin'ny pejin-tranonkala.
Miraikitra amin'ny horonam-peo mamaly
Lohateny iray hafa misy vokany lehibe rehefa tonga eo an-tampon'ny pejy ny menio, maninonaary amin'izao fotoana izao dia raikitra hatrany ary afaka manohy mamily ilay tranokala foana izahay.
Tsy mitovy amin'ny ambiny amin'ny sary mihetsika mety sy marefo rehefa mihetsika isika. Amin'ny faran'ny azy, ny takelaka dia mijanona ho ambony hatrany ambony.
Header Scroll mamaly
Header miditra / mivoaka
Lohateny izay miavaka amin'ny vokany Miditra / mivoaka aorinan'ny fihodinana ary izany dia miteraka fahatsapana ny fihemorana.
Lohateny hafa rehefa miafina arak'izay Mampiasa horonan-tsary miaraka amina sary mihetsika isika izay tsy voamariky fa manana kalitao lehibe.
Footer miaraka amin'ny mizana atiny
Footer avo lenta sy avo lenta ho an'ny gaga ny mpitsidika ho an'ny fomba mahafinaritra amin'ny fampisehoana an'ity habaka tranonkala ity.
Media sosialy footer
Footer izay misongadina ny bokotra izay mitondra mankany amin'ny tambajotra sosialy malaza indrindra. Misongadina ny sary mihetsika mitranga rehefa avelanao ny pointer totozy isaky ny tambajotra sosialy.
Lisitry ny footer finday mihetsika
Amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fikandrana amin'ny tranokala hijerena an'io tongotra io dia ho azonao atao tadiavo ny fizarana 2-3 izay hitan'ny mpampiasa amin'ny finday. Aseho amin'ny 767px izy io.
Fioteran'ny raikitra tsotra
Vita amin'ny HTML sy CSS dia a tongotra tsotra nefa tsy misy fandokafana sy volom-borona.
Lohatenin'ny React Video
Lohateny miaraka amin'i horonan-tsary tsotra React.js.
iray hafa lohateny misy horonan-tsary tsotra ary manana kalitao lehibe.
Lohaten-dahatsary an-tsarimihetsika feno miaraka amin'ny Mix-Blend
Asehoy a horonan-tsary feno misy soratra amin'ny sosona mampiasa maody mifangaro-mifangaro.
Sarimiaina an-dohan'ny Video
Ny sary mihetsika dia namboarina tamin'ny Adobe After Effects mba hifanaraka amin'ireo mpitety rehetra. Tsy mandeha amin'ny finday io.
Lohatenin'ny horonantsary mamaly amin'ny gradient
El gradient no misongadina amin'ity lohan-dahatsary ity avy amin'ny ambiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » teknolojia » CSS » Lohatenin-tsoratry ny CSS sy footer 29 ho an'ny bilaoginao na tranokalanao
TecnOku dia hoy izy:
Resy lahatra ahy daholo izy ireo. MISAOTRA
Valiny amin'i TecnOku
Lahatsoratra ho an'ireo tia fanontam-pirinty
Nintendo dia manambara ny sarimiaina animated Mario